အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ၏ Galaxy Note ကို4ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ကြီးမားသော, အစွမ်းထက်နှင့် Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံးသေး” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 15 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2014 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Samsung ၏ Galaxy Note ကို4မည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ရှိသမျှကို Phablet ကိုဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့တဦးတည်းလက်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့လမ်းပိုင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, စဉ်, သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်လိုအပ်ပါတယ်နိုင်အရာအားလုံးလုပ်ဖို့ကိရိယာဖြစ်ကတိပေးထားဘူး – အနည်းဆုံးမိုဘိုင်း device ပေါ်မှာ.
သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Galaxy Note phablet အတွက် 5.3in မှမျက်နှာပြင်န့်ပြီးနောက်, ထို့နောက် 5.5in ပြီးတော့ 5.7in အထိ, Samsung က 5.7in အရွယ်အစားနှင့်အတူကပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်အစားစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးမှတ်ချက်အဘို့တည်ဆောက်အရည်အသွေးနှင့် software ကိုအာရုံစိုက်, မျှော်လင့်, အစဉ်အဆက်အဖြစ်, LG ကနှင့် Apple မှယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူတက်ထားရန်.
ခြားနားချက်ဆိုတာတွေ့ရ: galaxy Note ကို4ညာဘက်တွင်, မှတ်စု3ဘယ်ဘက်မှာ, သို့မဟုတ်က? ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
side-by-side ကအကြားခြားနားချက်ကိုအစက်အပြောက်တစ်ခုဂိမ်းရဲ့ မှတ်စု3နှင့်မှတ်စု 4. အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုကြောင့်, တူ က galaxy အာလဖ, ထိုမှတ်ချက်4Samsung ရဲ့အသစ်သတ္တုဘောင်ရှိပါတယ်, အရာခဲယဉ်းသတ္တုအနားများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာရှာဖွေနေပလပ်စတစ် swaps.
နောက်ကျောတူညီပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်, ထိုမှတ်ချက်အဖြစ်အတုသားရေ3သောနေဆဲစျေးပေါခံစားရ, အထူးသဖြင့်အအာလဖ၏ကြောင်-နားတူသောနောက်ကျောနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်.
ဒါဟာအစိုင်အခဲခံစားရနှင့်အကောင်းဆုံးယနေ့အထိ Samsung ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုဖန်ဆင်း – ထိုမှတ်ချက်အပျေါမှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု3ပြီးနောက် galaxy S5 ကို.
အဆိုပါမြင်ကွင်းကြီးမှာတစ်လက်တော်၌ကျင်းပရန်နှင့်သုံးစွဲဖို့ဖုန်းကိုခက်ခဲစေသည်; ပလပ်စတစ်, အတုသားရေကျောနဲ့ Hard အနားတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချချုပ်ကိုင်ထားပေး, ဒါပေမယ့်ပင် Samsung ရဲ့တဦးတည်းလက် mode ကိုအတူကတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာအတှေ့အကွုံမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နဲ့ပြွန်အပေါ်တစ်ဦးအဖြစ်တော့အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, မီးရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကား.
အဆိုပါသတ္တုအနား Samsung ရဲ့အသစ်ဒီဇိုင်းဘာသာစကားအဖြစ်အသစ်က Galaxy အာလဖ mirror – ပလပ်စတစ်ခွံထဲကနေသိသိသာသာအဆင့်မြှင့်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါ Quad-HD ကိုမျက်နှာပြင်ကြည်လင်ပြတ်သားသည်, တောက်တောက်နှင့်ကျယ်ပြန့်ထောင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်, သောဗီဒီယိုများကြည့်ရှုစေသည်, ဓါတ်ပုံများနှင့် browsing အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသေးငယ်တဲ့ 5in စမတ်ဖုန်းအပေါ်ထက်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာအတှေ့အကွုံ, အများကြီးပိုကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေတဲ့တက်ဘလက်.
၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအလွန်မြင့်မား pixel သိပ်သည်းဆ 515 လက်မနှုန်း pixel ကင်မရာသေးသေးစာသားကိုဖတ်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်မြင်ရမယ့်မှန်ဘီလူးလိုအပ်နိုင်ပါသည်. နှိုင်းယှဉ်, ထို 5.5Apple က iPhone ကိုအတွက်6နောက်ထပ် တစ်ဦး 401ppi နှင့်မှတ်စုရှိပါတယ်3386ppi ရှိတယ် - ကွာခြားချက်အသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအပေါ်မြင်နိုင်သည်, ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုမြင့်မားတဲ့ resolution ကို၏တန်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြသည်. အဆိုပါတံ, သောဖုန်းရဲ့အောက်ခြေကနေထွက် slides, ဖြစ်နိုင်သမျှသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာအပေါ်စာသားကိုကြိုးကိုင်စေသည်, ဒါပေမဲ့လူကလုပ်ချင်နိုင်ဖွယ်ရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး.
အဆိုပါမှတ်ချက်48.5mm အထူသည်နှင့် 176g အလေးချိန်, လေးလံ 4G နှင့် iPhone ထက်ပိုထူ 1.4mm သော6Plus အားနှင့် 27g ထက်ပိုမိုပါးလွှာလေးပေမယ် 0.4mm LG ရဲ့ 5.5in G3, တစ်ဦးကညစ်တံများမဟုတ်သည့်. ဒါဟာအစ Note ကိုထက်ပိုထူပိုလေးနှင့် 0.2mm 8g ဖြစ်ပါတယ် 3.
Screen ကို: 5.7quad HD Super AMOLED အတွက်
processor: 2.7 GHz အမြန်နှုန်း Quad-core Qualcomm Snapdragon 805
သိုလှောင်ခြင်း: 32GB ကိုပေါင်း 128GB ကတ်များအထိထောက်ပံ့သော microSD slot ပါ
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 4.4.4 Samsung က TouchWiz နှင့်အတူ
ကို Camera: 16--megapixel အနောက်ကင်မရာ, 3.7--megapixel front-facing ကင်မရာက
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.0 BLE နှင့်အတူ, IR နှင့် GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 153.5 x က 78.6 x က 8.5mm
မျက်နှာပြင်အကြီးအကြည့်ရှုထောင့်နှင့်အတူကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါမှတ်ချက်4ထိပ်တန်း-of-the-line က 2.7 GHz Snapdragon နှင့်အတူယနေ့အထိအာဏာအရှိဆုံး Qualcomm မှ Processor ​​ကိုရှိပါတယ် 805 RAM ကို 3GB နှင့်အတူ. ဒါက Phablet ကိုယင်ကောင်စေသည်, နောက်ခံမှာပင်နှစ်ဦးအပေါ်မျက်နှာပြင်မတူညီတဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်ဘက်ခြမ်းနှင့်အများအပြားပိုပြီးပြေးနှင့်မသုံးနေပြီနှင့်အတူ.
အဆိုပါ Phablet ကိုတော်တော်လေးတာဘာမှကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်. ကအာဏာအများစုကိုအချိန်အများစုကိုဖြုန်းတတ်, ဒါပေမဲ့အသစ် processor ​​ကိုလည်းအလွန်အာဏာကိုအကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါသည်. သူကတောင်လေးလံအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတာဝန်ခံအပေါ်တစ်ဦးအစိုင်အခဲနှစ်ရက်ကြာ, တနေ့လုံးတွန်းအားပေးတဲ့အီးမေးလ်အပါအဝင်, အသိပေးချက်များနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း၏သုံးနာရီရာပေါင်းများစွာ, 30 ဂိမ်းနှင့် Bluetooth ကိုကျော်ဂီတ streaming များ၏တစ်နာရီ၏မိနစ်.
ဘက်ထရီထွက်ပြေးပါဘူးသောအခါ,, ထိုမှတ်ချက်4အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်တို့နှင့်အတူကြွသောက USB ပါဝါအဒက်သုံးပြီးစွဲချက်, ပတ်ပတ်လည် charging 50% ဘက်ထရီ၌ 30 မိနစ်, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာကအတူစတငျဖို့လုံးဝပြားချပ်ချပ်မဖြစ်သကဲ့သို့.
ပြတင်းပေါက်က mode ကို Chrome ကိုတူ apps များနှင့်ထိပ်ဘယ်ဖက်လက်ထောင့်ကနေဆွဲ-Down နှင့်အတူပိုမိုသေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ထဲသို့ဂဏန်းတွက်စက်ကျုံ့. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါမှတ်ချက်4အန်းဒရွိုက်၏ Samsung ရဲ့ version ကို TouchWiz ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်, သောသေးငယ်တဲ့ tweaks နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဖောင်လည်းပါဝင်သည်.
ထိုမှတ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 3, Samsung ကရှုပ်ထွေးစုပြုံပြွတ်သိပ်အပေါ်ပြန်သိပ်မရှိပါဘူးဖြစ်ပါတယ်. Gone အချည်းနှီးမူအယာများနှင့်အာဏာ sapping gimmicks များမှာ, အစားချွတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအသုံးဝင်သော features တွေဖြင့်အစားထိုးပေမယ့်လိုအပ်တဲ့အခါအပေါ်လှည့်နိုင်ပါတယ်.
လက်အိတ်မှတဆင့်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုမှမျက်နှာပြင် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ option ကိုရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့နေရာလေးကိုဖြစ်ပါသည်, နားမှရုပ်သိမ်းသည့်အခါဖုန်းကိုဖွကွေားကတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုမှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေစဉ်.
အကြီးမားဆုံးဖြည့်စွက် multitasking ကိုပတ်လည်, နှစ်ဦး app များကိုတစ်ကြိမ်မှာ on-screen ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေး. သာ Chrome ကိုအပါအဝင်ငါကို install လုပ်ခဲ့ထက်ဝက် apps များနှင့် ပတ်သက်. ထောက်ခံ multi-window ကို, Evernote နဲ့ Gmail, ဒါပေမယ့် Twitter ကို, Google Docs နှင့် Dropbox ကိုမှတ်သားလောက်ခြွင်းချက်ခဲ့ကြ.
multi-window ကိုမျက်နှာပြင်အပေါ် split-screen apps များတတ်၏, တစ်ကြိမ်မှာနှစ်ဦး. အပလီကေးရှင်းများအကြားအကွဲတယောက်ပိုကြီးသို့မဟုတ်သေးငယ်အောင်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အခြားပြတင်းပေါက်ထိပ်လက်ဝဲလက်ထောင့်ကနေဆငျးသကျဆွဲအားဖြင့် windowed နိုင်ပါတယ်, ထိုအကြောင်းကြားစာအရိပ်ဆွဲချဖို့ကြိုးစားနေစဉ်ငါမတော်တဆအကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ.
stylus: အချို့သောများအတွက်အသုံးဝင်သော, အများဆုံးအဘို့ကိုမသိဘဲ
အဆိုပါတံဖုန်း၏အောက်ခြေသို့ slot နှစ်ခုနှင့်လိုအပ်သည့်တိုင်အောင်လြှို့ဝှကျအဲ့ဒီအချိန်မှာ. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါမှတ်ချက်4Samsung ရဲ့ '' S Pen ပါ '' တံရှိပါတယ်, သောဖုန်း၏အောက်ခြေသို့သမ္မာသတိဆွဲထုတ်လိုက်တယ်. အများစုမှာဖွယ်ရှိလုံခြုံစွာ slot ပါထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့ကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုသုံးပါနှင့်ဦးမည်, ဒါပေမဲ့မှတ်စုအပေါ်ခြစ်လိုက်တာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းအချို့များအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
စာသားမရွေးချ, မျိုးစုံပြတင်းပေါက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စာရင်းဇယားနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လည်းတစ်ဦး mouse ကိုတူတံကိုအသုံးပြုပြီးသိသိသာသာပိုမိုလွယ်ကူသည်.
နောက်ကျောအပေါ် 16-megapixel ကင်မရာကင်မရာကလှုပ်ရှားထွက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် optical တည်ငြိမ်ရှိပါတယ်, selfies ဖြစ်ပေါ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်တိုက်ရိုက်အောက်ကပေါင်းတစ်နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါမှတ်ချက်4ဆက်ပြောသည် optical image stabilization တွေနဲ့ Galaxy S5 ကိုမှတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူသည့်ကင်မရာရှိပါတယ်, သောဓါတ်ပုံထဲကနေလက်လှုပ်ဖယ်ရှားပေးနှင့်အနိမ့်အလင်းအခြေအနေများအတွက်မှုန်ဝါးတားဆီးကူညီပေးသည်. ဗီဒီယိုလည်းအများကြီးချောမွေ့စေ.
Images ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ချွန်များမှာ, ကောင်းသောအသေးစိတ်နှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ. low-အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းကောင်းလှ၏, Samsung ရဲ့ကင်မရာကို app ကိုတစ်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းဟန်ချက်ညီ၏ကောင်းသောအလုပ်နှင့်ကို manual ချိန်ညှိတတ်စဉ်.
မှတ်ချက်၏နောက်ဘက်ကင်မရာကို selfie mode ကိုဖြစ်ပါတယ်, သောက selfie ဖမ်းယူသည်အထိအသုံးပြုသူရဲ့မျက်နှာနှင့်တုန်ခါမှုပေါ်သို့သော့ခတ်. နောက်ကျောအပေါ်ရုံကကင်မရာကိုအောက်တွင်နေရာယူထားအနှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ front-facing ကင်မရာကို selfies များအတွက် shutter button ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, သစ်ကျယ်ပြန့် selfie mode ကိုတစ်မြင်ကွင်းကျယ်နှင့်တစ်ဦး selfie အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်နေစဉ်, ခြောလူတိုင်းအောင်ပုံထဲက fit နိုင်.
အဆိုပါမှတ်ချက်4ရဲ့လက်ဗွေရာစကင်နာအိမ်တွင် button ကိုအောက်မှာထိုင်နှင့်ယနေ့အထိတစ်ဦးက Samsung စမတ်ဖုန်းအပေါ်အကြီးမားဆုံးဆုံးနဲ့တိကျမှန်ကန်သည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
ထိုမှတ်ချက်အပေါ်လက်ဗွေစကင်နာ4အသုံးပြုသူများကဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ log ပေးနိုင်ပါတယ်, လက်ညှိုးတစ်ဦးပွတ်ဆွဲသုံးပြီးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် app များ. ဒါဟာတိကျ 95% ထိုအချိန်ကာလနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် passcode နှင့် passwords အတွက် taping ထက်ပိုမြန်, သုံးလက်ချောင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုလက်မတဦးကိုအသုံးပြုပြီး.
ဖုန်း၏န​​ောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးကနှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာသည်အသုံးပြုသူများ Samsung ရဲ့ S ကိုကနျြးမာရေး app ကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ရေးမှတ်တမ်းတင်ဖို့ခွင့်ပြု, ခြေလှမ်းများနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများ-based ကြံ့ခိုင်ရေးတိုင်းတာခြင်းနှင့်အတူ. ဒါဟာကြော်ငြာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်, သူတို့အစဉ်မပြတ်စစ်မှန်သောအပြောင်းအလဲများကြည့်ဖို့အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်ကြသောအခါနှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာသာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်ထက်ပိုအသစ်အဆန်းဖြစ်ပါတယ်, အစား ad hoc တိုင်းတာထက်.
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့နောက်ကျောပလပ်စတစ်နှင့်သားရေများကဲ့သို့နည်းနည်းကြည့်ခံစားရရန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, အသုံးပြုသူတစ်ဦး-အစားထိုးဘက်ထရီပုန်း. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါမှတ်ချက်4အနက်ရောင်နဲ့£ 629 ကုန်ကျ, ကွေးညို, ပန်းရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ, အိုင်ဖုန်းထက်£ 10 ထက်ပိုသော6Plus အားနှင့်£ 249 ကို LG က G3 ထက်ပို, သော£ 380 ကုန်ကျ.
အဆိုပါမှတ်ချက်4Samsung ကသေးဖန်ဆင်းတော်မူပြီကိုအကောင်းဆုံး Phablet ကိုဖြစ်ပါတယ်. အလွန်ကြီးမားဖုန်းများသွားအဖြစ်ကအများဆုံးအသုံးဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အာဏာအရှိဆုံးနှင့်တံတကယ်အချို့သောအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်.
တဦးတည်းလက်အသုံးပြုမှုခက်ခဲသည်, သို့သော်ဤကိစ္စတွင် 5.5in သို့မဟုတ် 5.7in ထက်ပိုကြီးတဲ့ screen ကိုရှိခြင်း၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖြစ်ပါသည်. LG ရဲ့ G3 ဆဲလက်တစ်သုံးစွဲဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ screen ကိုရှိပါတယ်.
လူတစ်ဦး Phablet ကိုမဝယ်သင့်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားပြဿနာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မှတ်စု4ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်မယ့်တာဝန်ခံနှင့်ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံးအဖွံ့ဖြိုး Phablet ကိုအပေါ်နှစ်ရက်တည်တံ့ကို Android Phablet ကိုအမှိုက်ပုံလသရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏.
အကောင်းအဆိုး: ကြီးမားသော, ထက်သော, ရောင်စုံနှင့်တောက်ပသောမျက်နှာပြင်, အလွန်အစိုင်အခဲတည်ဆောက်, အလွန်ကြီးစွာသောကင်မရာက, အလွန်ကြီးစွာသောဘက်ထရီသက်တမ်း, ကောင်းသောလက်ဗွေစကင်နာ, သပ်သပ်ရပ်ရပ်တံ
Cons: အဆင်ပြေတလက်အသုံးအဘို့လည်းကြီးမားသော, ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက် သာ. လေး, စျေးကြီး, TouchWiz အချို့သောဖြစ်စရာပါလိမ့်မယ်
• Samsung ရဲ့ Galaxy အာလဖပြန်လည်သုံးသပ်: တိုက်ရိုက် iPhone ကို6ပြိုင်သူ
• Apple က iPhone ကို6နောက်ထပ်: ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြောင့်ကြီးမြတ်ခံစားရ – ပြန်လည်သုံးသပ်မှု
• iPhone ကို6ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ပါးလွှာ, ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးအနည်းငယ်စျေးသက်သာ